SopCast waa hab fiican si aad u daawato barnaamijyada aad jeceshahay adigoo isticmaalaya VLC media player . Waxa ugu weyn waa in SopCast waa lacag la'aan. SopCast kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato ama maqli videos ama maqal internet-ka. Waxaad isticmaali kartaa media player VLC sida qalabka si aad u daawato video ah.
Qeybta 1: Daawashada SopCast on Windows
Qeybta 2: Ka ciyaarista SopCast on Mac
1. Open SopCast iyo gal adeegga. Ka dib markii barnaamijka furmo suuqa kala galay ugu weyn. Waxaad heli doontaa in aad doorato ciyaaryahanka dibadda halkaas oo aad ka heli kartaa fursad aad ku ciyaaryahanka VLC oo kaliya waxa ay doortaan. SopCast iyo gal adeegga. Waxaa laga yaabaa in xitaa iyada oo your computer si aad u hesho ciyaaryahan VLC ah. Just marka laga reebo adigoo gujinaya ok.
2. Exit SopCast oo mar kale abuurtaan. Gal oo ka dibna la furo channel aad rabto inaad daawato ka soo liiska website.
3. Hadda si gooni gooni ah ayaa bilaabaysa VLC ah. Tag warbaahinta ka dibna in la furo network. Waxaad mar walba isticmaali karaan si ay u muujiyaan doorasho dheeraad ah haddii aad rabto in la xakameeyo bandwidth ah. Calan SopCast sida cinwaanka geeyo ka.
Mac ma ogolaan karaa rakibidda SopCast si toos ah. Si aad u ordaan SopCast, aad u baahan tahay si loo soo dajiyo app khamriga. Tani waa sababta SopCast waddaa on files .exe halka Mac taageeri kartaa oo kaliya .dmg files in ay yihiin kordhinta default for files on Mac ah.
App Khamrigu wuxuu kuu ogolaanayaa software Windows harsan aad Mac by tarjumayaa files .exe galay files .dmg in aad Mac garan karaan. Ku rakib SopCast-isticmaalaya khamri aad Mac. Waxa ka muhiimsan, waxaad hubisaa in aad ciyaaryahan VLC ku saabsan nidaamka. Hadda Isticmaal tallaabooyinka soo socda si ay u dejiyaan SopCast ku VLC.
1. Waxa ugu horeeya waa in aad waa in aad heshaa account SopCast ah. Waxaad mar walba ku yeelan karaan xisaabta lacag la'aan ah, laakiin xusuusnow in aad yeelan doonaan in ay gasho mar kasta si uu u bilaabi. Waxaa jira adeegyo lacag la'aan ah oo la bixiyey. Marka barnaamijka furaa screen ugu weyn, riix badhanka ikhtiyaarka oo taga si ay u doortaan ciyaaryahanka dibadda. Waxaad heli doontaa xitaa iyada oo loo marayo habka faylka eedeysanuhu ee VLC oo sida caadiga ah ka yar yahay Utilities. Marka aad soo xulay VLC, ogolaadaan isbedelka ku dhacay.
2. Exit SopCast oo mar kale la furo. Log in mar kale, ka dibna la furo channel ah si aad u daawato ka mid ah liiska cinwaanka "koosaarta: //" cinwaanka.
3. Hadda, aan bilowno ciyaaryahan VLC ah iyo in la hubiyo in labada barnaamij u furan yihiin. Wax muhiim ah waa u hubiso in aad la soco cinwaanka cinwaanka SopCast ka bar. Waxaad mar walba isticmaali kartaa bar ah si ay u daawadaan channel cusub ee loo idmo galaya cinwaanka.
4. VLC, u tag File menu iyo click ku shabakad u furan. Waxaad paste karaa link toos http://127.0.0.1:8902/tv.asf inuu ku soo bilowdo ka hoorto video .
Tallaabooyinka waa ay yara adag iyo aad ayaa looga baahan yahay in ay sii qulquli, taas oo qaadan kara muddo ah si uu u dhameystiro. Waxa muhiim ah in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan hoorto gudaha iyo dibadda VLC ah.
> Resource > Windows > Sida loo Play SopCast on VLC?